အဝေးကြည့် – Min Thayt
စာအုပ်အညွှန်း – အဝေးမြင် / ကျော်ဝင်း
ဒုတိယအကြိမ် (ဖြည့်စွက်) ၊ တကောင်းစာပေ။
အဝေးမြင် ၂၀၁၁/ ပထမအကြိမ်ထုတ်ကို တမ်းတမ်းဆွဲဖတ်မိတာကြာပြီ။ ယခု ဒုတိယအကြိမ် ဖြည့်စွက်စာမူ တချို့နှင့် ထပ်ထွက်လာသည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ပထမအကြိမ်ထုတ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်က (၇) နှစ်တိတိ အကွာကျမှ ထွက်လာသည်။
စာအုပ်ကို လူများ၊ နေရာများ၊ ဖလင် သဘင် ဂီတ ဆိုပြီး သုံးပိုင်းခွဲသည်။ လူများကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ခွဲထား လိုက်သည်။ မောင်စူးစမ်း နှင့် ကိုကိုမောင်ကြီး အကြောင်း စာမူ ဖြည့်စွက်ချက်ကို တွေ့ရသည်။ တိန့်ရှောင်ဖိန် အကြောင်း နှင့် မဖတ်ရသေးသော အက်ဆေးတချို့ကိုလည်း တွေ့လိုက်ရသည်။ နောက်ဆုံး အထူးဆောင်းပါး မှာ ကျိန်စာ။ ကျိန်စာ။
စာရေးဆရာဆိုတာ ကျိန်စာမိနေတဲ့လူ။ ကျနော်က ထပ်ပြီး ဖြည့်စွက်လိုက်ချင်သည်။ စာရေးဆရာဆိုတာ စိတ်လိုလက်ရ ကျိန်စာအမိခံသူ။
အဝေးမြင်ကို ဖတ်ရင်း စာရေးသူနှင့်အတူ အဝေးကြည့်ကြည့်ဖြစ်သည်။ သူ့ခေတ်၊ ကိုယ့်ခေတ် ဘာကွာသနည်း။ ဘာခြားသနည်း။ အမြင်၊ အတွေ့အထိ၊ ခံယူပုံ၊ ယူဆပုံ၊ တွေးထင်ပုံ… အစရှိသဖြင့်။ ဆရာ ကျော်ဝင်းနှင့် ကျနော်မှာ ဖအေနှင့်သားအရွယ်လောက် ခြားပါသည်။ ခေတ်ချင်း မတူ။ ဖြတ်သန်းပုံခြင်း မတူ။ သို့သော် တူညီစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကို မြင်ပုံမှာတော့၊ လူကြီးအမြင် လူငယ်အမြင် ကွာခြားပါ လိမ့်မည်။
ကျနော်က ကျနော့်ရှေ့မျိုးဆက်ကြည့်ခဲ့သော မှန်ပြောင်းကို ကိုင်၍ ကြည့်ချင်သည်။ ထို့ကြောင့် အဝေးမြင်ကို ဖတ်သည်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် စုံစီနဖာ ဖတ်ခွင့်ရသော စာအုပ်ဟု နဂိုကတည်းက မှတ်ချက်ချမိသည်။ ယခု ဒုတိယ အကြိမ်ထုတ်ကိုလည်း တကူးတကသွားဝယ်၍ ဖတ်သည်။ ဖတ်ခွင့်ရနေသေးသည်ကိုက၊ ကျနော့်အဖို့ ကံကောင်းလှသည်။
ခပ်သွက်သွက်အရေးအသားများက အခုထက်ထိ ရင်ထဲမှာ ငြိဆဲ။ တချို့စာပုဒ်များက ဘာသာပြန်သဘောဖြစ် သည့်တိုင် မူရင်းစာရေးသူက နဘေးက ထိုင်ပြောနေသလို၊ မြန်မာမှုအပြုကောင်းလွန်းနေသည်။ မြန်မာ့အကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့အကြောင်းကို ရောထွေးမွှေနှောက် မြည်းစမ်းကြည့်နေရသည့် သဖွယ်။ အခုထိ ခံတွင်း တွေ့တုန်း။
တို့ထိမှုများက မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်။ နှိုက်ထုတ်မှုများက ရှတတ။ မြည်းရသမျှတိုင်းက ချိုမြမြ။ တစ်အုပ်လုံးကို ခြုံကြည့်သော် အတော် ခံတွင်းလိုက်သော စာအုပ်ဟု ပြောရမည်။ ဟင်းအမယ်စုံစုံလင်လင်ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း၊ တစ်စားပွဲတည်း စားရသလို။ စာမူသက်တမ်းက ရင့်ပြီ။ သို့သော် အခုထိ အာဟာရရှိတုန်း။ မသိုးမပုပ်….၊ စား၍ ကောင်းတုန်း။
အဝေးမြင်ကို တို့ထိရင်း သိန်းဖေမြင့်ကို တွေ့ရသည်။ သခင်တင်မြကို တွေ့ရသည်။ ဦးနုကိုတွေ့ရသည်။ သခင်သန်းထွန်းကို တွေ့ရသည်။ ဒဂုန်တာရာနှင့် ဗန်းမော်တင်အောင်ကို တွေ့ရသည်။ မောင်စူးစမ်း၊ ကိုကိုမောင်ကြီးမှ အစ…. ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း အဆုံး။ နေဝင်းမောင်လည်း ပါသည်။ ကျနော် သဘောကျရ သည်။
ပြီးတော့ ကျနော့် ဟာဒယနှင့် ကိုက်သည့် လူထု။ ဂျာနယ်ကျော်။ အို… ပြောမဆုံးပေါင်၊ တောသုံးတောင်။
ထူးထူးခြားခြား ဆရာကြီးမောင်စူးစမ်းအကြောင်းက ခပ်ကျယ်ကျယ်ပါသည်။ ထုတ်ဝေထားပြီးသား ဘဝမာတိ ကာများ စာမူကို ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ထားသည်။ ဆရာကြီး မောင်စူးစမ်း၏ မဟာဗျူဟာ ပြဿနာများ အကြောင်း ကို လေ့လာရသည်။ မောင်စူးစမ်းသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တည်ထောင်စဉ်က ပါဝင်ခဲ့သူဆိုတာ၊ သမိုင်း အမြုပ်ခံရသည်လား။ ဖော်သူ မရှိတာလား။ ဖာသိဖာသာ နေကြသလား…. ကျနော့်မှာ ဖတ်ရင်း ဝိရောဓိ များ အခါခါ။
ခေတ်ကာလအကူးအပြောင်း၊ စနစ်အပြောင်းအလဲမှာ နိုင်ငံရေးလိုက်ပါမှုများ ပြောင်းလဲသွားပုံကို လေ့လာရ သည်။ ဘယ်လို ဘယ်ကဲ့သို့ ဆိုတာကို ဆန်းစစ်မိသည်။ အထူးသဖြင့်… သိန်းဖေမြင့်၊ သခင်တင်မြနှင့် မောင်စူးစမ်း။ နိုင်ငံရေးဘိုးအေကြီးများ အကြောင်း။
အဝေးမြင်ကို ဖတ်လိုက်တော့မှ လီနင်၊ ထရော့စကီး နှင့် ဂေါ်ကီတို့အကြောင်း လိပ်ပတ်လည်ရသည်။ တိန့်ရှောင်ဖိန်နှင့် လီကွမ်ယု နှစ်ယောက်ကတော့ နဂိုကတည်းက မြိန်မြိန်လျက်လျက် စားသောက်ပြီးသား စာမူများဖြစ်သည်။
အမြင်များကို ဖတ်ရတာ ကောင်းသည်။ မှန်ပြောင်းကို ငှားကြည့်ရသလို အရသာရှိသည်။ သူဘယ်လို မြင်သလဲ။ ကိုယ်ဘယ်လို ကြည့်မလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ။ ကျနော်က လူများကို စိတ်ဝင်စားသည်။ စာအုပ်များကို စိတ် ဝင်စားသည်။ လူများထဲမှ ပညာရှင်ဆိုသူများ၊ နိုင်ငံရေးသမားဆိုသူများ နှင့် စာရေးဆရာများ၊ ဒဿနသမားများ ကို ပိုလို့ စွဲငြိသည်။
ဟန်တင်တန်၊ မီလ်တန်ဖရိုင်းမင်းမှသည် မတ်(ခ) အဆုံး စိတ်ဝင်စားစရာများက များများစားစား။ မက်္ခအကြောင်း ဖတ်ရင်း ကြမ်းတမ်းလွန်းသည့် မက်္ခ၊ နုရွလွန်းသည့် မက်္ခကို တွေ့ရသည်။ မက်္ခအယူအဆများ နိုင်ငံရေးနယ်မှ ပညာရေးနယ်သို့ ကူးပြောင်းသွားသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ အိုင်ဒီယာဗေဒမှာ မက်္ခက ဆက်လက်မင်းမူနေဆဲ ဆိုတာကို တွေ့လိုက်ရသည်။ မြောင်းထဲရောက်သွားသော ကွန်မြူနစ်ကြောင့် မက်္ခကို နှမြောတသနေသော ကျနော် နည်းနည်း စိတ်သက်သာရာရသွားသည်။ တော်သေးသည်။ မက်္ခတစ်ယောက် တက္ကသိုလ် ပရဝုဏ်မှာ ကျင်လည်ရှင်သန်နေသေးသည်။
ရှင်သန်မှာကိုး။ သူ့အားထုတ်မှုက တော်ရုံမှ မဟုတ်တာ။
ဆရာကျော်ဝင်း တို့ထိလိုက်သော အဝေးမြင်များကြောင့် ကျနော့်မှာ ဖတ်စရာ များများ ထပ်ရလာသည်။ တိုး၍ လေ့လာရမည့် နယ်အသစ်များ ပေါ်လာသည်။ နက်သထက် နက်အောင် နှိုက်ရအုံးမည့် ဧရိယာများ ပေါ်လာ သည်။ မြန်မာ၊ ကမ္ဘာ။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ။ ခေတ်နှောင်း၊ ခေတ်သစ်။ ယခင်၊ ယခု။
ည ၈း၀၈
၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ ။
ဆရာေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴျမင့္ တို႔ မိသားစု
Tagged Myanmar Book Review, အေဝးၾကည့္, အေဝးျမင္, ေက်ာ္ဝင္း
Previous post ဖွတ်ကြားစိတ်ဓာတ်တိုက်ဖျက်ရေး အရေးတော်ပုံ
Next post ဒဿနအမြင်